X ကို ဘယ်မျဉ်းကြောင်းကနေ စပြီး ရေးဆွဲပါသလဲ၊ ဘယ်လိုရေးဆွဲပါသလဲ ?? | MyTech Myanmar
X ကို ဘယ်မျဉ်းကြောင်းကနေ စပြီး ရေးဆွဲပါသလဲ၊ ဘယ်လိုရေးဆွဲပါသလဲ ??
X ကို ဘယ်မျဉ်ကြောင်းကနေ စပြီး ဆွဲလဲ ဆိုတဲ့ တွစ်တစ်ခုဟာ တွစ်တာအသုံးပြုသူတွေကြားမှာ ရေပန်းစားလျက် ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ တွစ်ကို sixers smasey @SMASEY ဆိုသူက အစပျိူးလိုက်တာ ဖြစ်ပြီး သူမအနေနဲ့ X ရေးဆွဲပုံ ရေးဆွဲနည်းဟာ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွက် သူများတွေ X ကို ဘယ်လို ဆွဲလဲဆိုတာ သိချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူမက “သင်တို့ရော X ကို ဘယ်လိုရေးဆွဲကြလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့အတူ X ရေးဆွဲပုံ ရေးဆွဲနည်း ၈မျိူးကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
X ရေးဆွဲပုံ ရေးဆွဲနည်းမှာ စုစုပေါင်း ၈မျိူး အထိရှိပြီး အရောင်လေးတွေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးထားတာကတော့ ပထမဦးဆုံး ဆွဲလိုက်တဲ့ မျဉ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မျဉ်းကြောင်းတွေကိုလည်း မြှားလေးတွေနဲ့ အပေါ်ကနေ အောက်ကို ဆွဲချတာလား ဒါမှမဟုတ် အောက်ကနေ အပေါ်ကို ဆွဲတက်တာလား ဆိုပြီး ၂မျိူး ခွဲခြားထားပါသေးတယ်။
သူမရဲ့ မေးခွန်းကို မြင်ပြီး စာရေးသူ မောင်သရ အပါအဝင် လူတော်တော်များများ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ X ဆိုတဲ့ စားလုံးပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် ရေးခဲ့ဖူးပေမယ့် ဘယ်မျဉ်းကြောင်းကနေ ဘယ်လိုစဆွဲပြီး ရေးခဲ့လဲဆိုတာ သေချာ မမှတ်တော့ပါဘူး။ ဒါ့ပေမယ့် တချိူ့လူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ X ရေးဆွဲပုံ ရေးဆွဲနည်းကို သေချာ မှတ်မိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သေချာ မမှတ်မိတာကြောင့် ရှေ့မှာရှိတဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ X ပုံစံကို လက်ချောင်းနဲ့ ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဓာတ်ပုံထဲက နံပါတ် ၇ နဲ့ ထပ်တူကြနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း နံပါတ် ဘယ်လောက်နဲ့ ထပ်တူကြလဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားပါဦး…
X ကို ဘယျမြဥျးကွောငျးကနေ စပွီး ရေးဆှဲပါသလဲ၊ ဘယျလိုရေးဆှဲပါသလဲ ??
X ကို ဘယျမြဥျကွောငျးကနေ စပွီး ဆှဲလဲ ဆိုတဲ့ တှဈတဈခုဟာ တှဈတာအသုံးပွုသူတှကွေားမှာ ရပေနျးစားလကျြ ရှိပါတယျ။ အဆိုပါ တှဈကို sixers smasey @SMASEY ဆိုသူက အစပြိူးလိုကျတာ ဖွဈပွီး သူမအနနေဲ့ X ရေးဆှဲပုံ ရေးဆှဲနညျးဟာ အလှနျစိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့အတှကျ သူမြားတှေ X ကို ဘယျလို ဆှဲလဲဆိုတာ သိခငျြခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူမက “သငျတို့ရော X ကို ဘယျလိုရေးဆှဲကွလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခှနျးနဲ့အတူ X ရေးဆှဲပုံ ရေးဆှဲနညျး ၈မြိူးကို ရှေးခယျြခှငျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။
X ရေးဆှဲပုံ ရေးဆှဲနညျးမှာ စုစုပေါငျး ၈မြိူး အထိရှိပွီး အရောငျလေးတှနေဲ့ သတျမှတျပေးထားတာကတော့ ပထမဦးဆုံး ဆှဲလိုကျတဲ့ မြဥျကွောငျးဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မြဥျးကွောငျးတှကေိုလညျး မွှားလေးတှနေဲ့ အပျေါကနေ အောကျကို ဆှဲခတြာလား ဒါမှမဟုတျ အောကျကနေ အပျေါကို ဆှဲတကျတာလား ဆိုပွီး ၂မြိူး ခှဲခွားထားပါသေးတယျ။
သူမရဲ့ မေးခှနျးကို မွငျပွီး စာရေးသူ မောငျသရ အပါအဝငျ လူတျောတျောမြားမြား ကွောငျတောငျတောငျ ဖွဈသှားကွပါတယျ။ X ဆိုတဲ့ စားလုံးပေါငျး မရမေတှကျနိုငျအောငျ ရေးခဲ့ဖူးပမေယျ့ ဘယျမြဥျးကွောငျးကနေ ဘယျလိုစဆှဲပွီး ရေးခဲ့လဲဆိုတာ သခြော မမှတျတော့ပါဘူး။ ဒါ့ပမေယျ့ တခြိူ့လူတှကေတော့ သူတို့ရဲ့ X ရေးဆှဲပုံ ရေးဆှဲနညျးကို သခြော မှတျမိနပေါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ သခြော မမှတျမိတာကွောငျ့ ရှမှေ့ာရှိတဲ့ စားပှဲပျေါမှာ X ပုံစံကို လကျခြောငျးနဲ့ ဆှဲကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ ဓာတျပုံထဲက နံပါတျ ၇ နဲ့ ထပျတူကွနတော တှရေ့ပါတယျ။ ခငျဗြားတို့လညျး နံပါတျ ဘယျလောကျနဲ့ ထပျတူကွလဲဆိုတာ ပွောပွပေးသှားပါဦး…
MyTech Myanmar2019-01-21T12:26:06+06:30January 21st, 2019|HowTo, News, Tips & Stories|